नयाँ ठाउँमा किन निन्द्रा पर्दैन ? यस्तो छ कारण - hamro Desh
एजेन्सी । के तपाईलाई पनि नयाँ ठाउँमा निन्द्रा पर्दैन ? धेरैजसोले यो समस्यालाई महसुश गरेका छन् । हामी दिनहुँ जुन ओछ्यानमा सुत्छौ, त्यसमा पल्टिएको केही क्षणमै निन्द्रा लागिहाल्छ । तर, हामी कुनै नयाँ ठाउम पाहुना गयौँ वा बास बस्न पुग्यौँ वा होटलमा बस्नुपर्यो भने त्यहाँको ओछ्यानमा निन्द्रै पर्दैन ।